मत्सुमा! चेरि फूलहरूमा बेरिएको मत्सुमा महलमा जाऊ! - Best of Japan
होक्काइडो, जापानमा चेरी खिलका साथ मात्सुमा महल
मत्सुमा-चो होक्काइडोको दक्षिणी भागको टुप्पो हो। धेरै वसन्तहरु यहाँ प्रत्येक वसन्त Maतु मा Matsumae महल मा चेरी फूलहरु हेर्न आउँछन्। हत्कोडेटको गोरियोकाकूको साथ होक्काइडोमा बाँकी रहेका केही महलहरूमा मत्सुमा क्यासल एक हो। यस पृष्ठमा म मत्सुमा महल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
मत्सुमा महल होक्काइडोमा एक मात्र जापानी महल हो
चेरी फूलहरू मत्सुमा महलमा तपाईंले मात्सुमा-चो मा हेर्नु पर्छ
पुरानो महलको ढोका १ th औं शताब्दीको बीचमा मत्सुमा, होक्काइडोमा विस्तार भयो
मत्सुमा महल १ Ma०1606 मा मात्सुमा क्लान द्वारा निर्माण गरिएको थियो। महल भन्नको लागि यो सानो कुरा थियो। यद्यपि, १ th औं शताब्दीमा यस इलाकामा विदेशी जहाजहरू प्रायः देखा पर्ने हुँदा, त्यस समयमा जापानमा शासन गर्ने टोकुगावा शोगुनेटको आदेशले एउटा पूर्ण किल्ला निर्माण गरिएको थियो। यसरी १ 19 1854 मा वर्तमान आकारको मत्सुमा महलको जन्म भयो।
सन् १1867 मा, जापानमा टोकुगावा शोगुनेट पतन भयो, नयाँ सरकारको स्थापना भयो। यस समयमा टोकुगावा शोगुनेटका केही फौजहरूले जहाजको नेतृत्व गरे र होक्काइडोमा भागे। तिनीहरूले हाकोडाटे ओगटे र मत्सुमा क्यासललाई पनि आक्रमण गरे। मत्सुमा महल केवल केहि घण्टामा हटाइएको थियो।
टोकुगावा शोगुनेटको फौजलाई हाकोदेटमा नयाँ सरकारी सेनाले आक्रमण गरे र आत्मसमर्पण गरे। यससँगै, मत्सुमा क्यासल पनि नयाँ सरकारी सेनाको नियन्त्रणमा आए।
किनभने हाकोडाटेको गोरियोकाकु पश्चिमी शैलीको महल हो, मत्सुमा महल होक्काइडोमा रहेको केवल जापानी शैलीको महल हो भनिन्छ। मत्सुमा क्यासल जापानको उत्तरी टोकमा जापानी शैलीको महल पनि हो।
दुर्भाग्यवश यस महलको अधिकांश भाग १ 1949 1961 in मा आगोले नष्ट भयो। वर्तमान महल टावर तीन कलेको भवन हो जुन प्रबलित कfor्क्रीटबाट बनेको छ जुन १ XNUMX in१ मा पुनर्निर्माण गरिएको थियो। यद्यपि माथिको फोटोको ढोका जस्ता सानो अंश पुरानो हो र जापान को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पत्ति को रूप मा नामित।
मत्सुमा महल अब पार्कको अंश हो "मत्सुमा पार्क"। मत्सुमा पार्क होक्काइडोमा अग्रणी चेरी फूलहरूको रूपमा चिनिन्छ।
मत्सुमा महलमा, विभिन्न चेरी फूलहरू टोकुगावा शोगुनेट युगबाट हुर्केका थिए। करीव करीव २ kinds० किसिमका चेरी रूखहरू अहिले १०,००० छन्। त्यहाँ c०० वर्ष भन्दा बढि उमेरका साथ विशाल चेरी फूलहरू छन्। किनकि खिलने समय चेरीको रूखको प्रकारमा फरक पर्दछ, म्यात्सु क्यासलमा तपाईले अप्रिल देखि मध्य मेदेखि चेरी ब्लासमको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ। महल र चेरी फूलहरू रातको समयमा उज्यालो हुन्छन् र धेरै सुन्दर छन्।
जब चेरी खिलने मौसम समाप्त हुन्छ, मात्सुमा-चो धेरै शान्त हुन्छ। यो राम्रो विचार हुन सक्छ ताजा हरियो वा शरद पातहरु को समयमा मात्सुमा महल को भ्रमण गर्न। मत्सुमा महल जाडोमा राख्न मिल्दैन, त्यसैले कृपया ख्याल राख्नुहोस्।
यो हाकोडेट केन्द्रबाट मत्सुमा क्यासलको लागि कारबाट करीव २ घण्टा लाग्छ र शिन्कानसेनको किकोनाइ स्टेशनबाट करिब १ घण्टा बसमा।
डाटा: मत्सुमा महल
मत्सुशिरो १144, मत्सुमाइचो, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／:: ०-9-१-00: ०० (१:17::00० पछि प्रवेश छैन)
■ अन्तिम दिन December डिसेम्बर ११ देखि अप्रिल ／ सम्म
■ प्रवेश शुल्क ／ y／० येन (वयस्क), २360० येन (प्राथमिक र जूनियर हाई स्कूल विद्यार्थीहरू)